Maka: php | Martech Zone
Qho ngeveki ndichitha ixesha kunye nomhlobo wam olungileyo, uAdam Omncinci. UAdam ngumphuhlisi obalaseleyo… uphuhlise iqonga lokuthengisa izindlu nomhlaba elinempawu ezintle - nditsho nokongeza i-imeyile ngokuthe ngqo kwiiarhente zakhe zokuthumela iiposikhadi ngaphandle kokuyila! Njengam, uAdam ukhule waya kwiilwimi ezahlukeneyo kunye neqonga. Ewe uyenza ngobungcali kwaye yonke imihla ngelixa ndinamathele ekuphuhliseni yonke into
Ukuba wenze uphuculo oluninzi lweWordPress, uyazi ukuba kuhlala kuguquguquka kwaye kuyakhawuleza ukusebenza kwidesktop yakho okanye kwilaptop kunokuba uhlala ukhathazekile ngokudibanisa ukude. Ukuqhuba isiseko sedatha yendawo kunokuba yintlungu, nangona… njengokusetha i-MAMP okanye i-XAMPP ukuqala iseva yewebhu yendawo, yenza ulwimi lwakho lwenkqubo, emva koko uqhagamshele kwindawo yogcino lwedatha. I-WordPress ilula ngokulula kuyilo loyilo